Dowladda Tuunis oo Dumarka Muslimaadka ah ka Mamnuucday Xirashada Niqaabka.
Xukuumadda dabadhilifka Tuunis ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay mamnuucday Niqaabka ama Indha shareerka ay xirtaan dumarka muslimaadka ah.
Mid kamida saraakiisha ciidamada Mareykanka ayaa markale lagu dilay dagaalka 18 sana jirsaday ee ka socda wadanka Afghanistan.
Ciidamada Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa markale guluf dagaaleed aad u ballaaran ku qaaday degmooyin dhaca Koonfurta wadankaasi oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Xukuumadda.
0 Wednesday June 26, 2019 - 06:42:36
Wadanka Muritaaniya waxaa lasoo gaba gabeeyay doorashooyinkii madaxtinimada oo ahaa kuwa ay ku loolamayaan kooxaha mucaaradka ah iyo jeneraallada dabadhilifyada ah ee mudadad tobanaanka sana ah soo maaamulayay wadanka dhaca mandiqadda maqribul islaam ee waqooyiga qaaradda afrika.
Gobolka Mesaan ee dhaca Koonfurta wadanka Ciraaq ayaa noqday gobolka ugu kulul caalamka kadib markii ay ku dhufteen dabeyllo kuleyl daran wata.
Tobanaan qof ayaa ku dhimatay silsillado qaraxyo ah oo lagu beegsaday magaalooyin katirsan wadanka Sri Lanka ee dhaca Koonfur Bari qaaradda Asia.
0 Wednesday April 17, 2019 - 17:20:41
Kala qeybsanaan xooggan ayaa durbadiiba soo kala dhaxgashay ciidanka Melleteriga wadanka Suudaan maalin kadib markii ay xilka ka tuureen Cumar Xasan Al Bashiir.
Pakistaan oo sheegtay in Hindiya ay qorshaysay weerar ka dhan ah dalkeeda.(Warbixin)
Dowladda Bakistaan ayaa eedayn ujeedisay dalka dariska la ah ee Hindiya kaasi oo ay kala dhaxayso colaad muddo soo jirtay oo ku aadan lahaanshiyaha gobalka lagu muranyahay ee Kashmiir.
Wararka ka imaanaya wadanka Liibiya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Mareykanka ay isaga baxeen saldhig ay ku lahaayeen magaalada Daraabulis ee caasimadda u ah wadankaasi.
Wararka ka imaanaya wadanka Afghanistan ayaa sheegaya in weerar isku day dil ah uu ka badbaaday mas'uulka labaad ee ugu sarreeya xukuumadda dabadhilifka ah ee fadhigeedu yahay magaalada Kaabuul.
Muqaawamada Filasdiin Oo u diyaar garoowday dagaal ka dhan ah Yahuudda.
0 Friday March 29, 2019 - 17:27:29
Ilo wareedyo laga helay magaalada Ghaza ee dhulalka filasdiin ayaa sheegaya in xoogaga muqaawamada ay udiyaar garoobeen isla caabinta isku day walba oo weerar ka yimaada ciidamada Yahuudda sahyuuniyadda ee xoogga ku qabsaday dhulalkaFilasdiin.
Taliyaha Ciidanka Al Jazaa'ir Oo Ku Baaqay in uu casilo Botafaliiqa.
Kacdoonka shacbiga ah ee ka socda wadanka Al Jazaa'ir ee dhaca waqooyiga qaaradda Afrika ayaa dhaliyay is qabqabsi siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxda ugu sarraysa maamulka wadankaasi.
0 Wednesday March 20, 2019 - 08:03:24
wuxuu ahaa go'aan mar la arag ah oo uu qaatay madaxweynaha kaligiis taliyaha ah ee wadanka Kazakhstan ee dhaca qaaradda Asia.
0 Monday March 18, 2019 - 07:07:46
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya duufaanno daadad wata oo ku dhuftay wadamada Simbabwe iyo Mozambique ee dhaca qaaradda Afrika.
0 Wednesday March 13, 2019 - 06:40:23
Dowladda Ingiriiska ayaa markale ku guul darraysatay in ay xal uhesho qorshaha ay uga baxayso Ururka Midowga Yurub.
Imaarada islaamiga Afghanistan ayaa xaqiijisay in meel wanaagsan ay marayaan wadahadallada ay kula jirto dowladda Mareykanka ee ku aaddan qaabka ciidamada soo duulayaasha ah uga baxayaan wadankaasi.
0 Wednesday March 06, 2019 - 08:42:16